မာလီ: "အဆိုပါ Minusma တုံ့ပြန်မှုအန္တရာယ်ကင်းနိုင်ပါတယ်မသာကိုသတိထားပါဖြစ်ပါတယ်" - JeuneAfrique.com - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကုမ္ပဏီ "မာလီ:" အဆိုပါ Minusma တုံ့ပြန်မှု "ဘေးကင်းလုံခြုံစေနိုင်ပါတယ်မသာကြောင်းသတိပြုမိသည် - JeuneAfrique.com
မာလီ: "အဆိုပါ Minusma တုံ့ပြန်မှုအန္တရာယ်ကင်းနိုင်ပါတယ်မသာကိုသတိထားပါဖြစ်ပါတယ်" - JeuneAfrique.com
ဝေဖန်သူများကမာလီ, Lubna Benhayoune အတွက်အကျပ်အတည်းဖြေရှင်းထဲမှာ "All-အန္တရာယ်ကင်း" ၏မဟာဗျူဟာ၏ကျရှုံးခြင်းအပေါ် ပို. ပို. အငြိုးတကြီးနဲ့ဖြစ်ကြသည်စဉ်အခါ, တာဝန်ခံ "တည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး" ဟုအဆိုပါမစ်ရှင်ကပြောပါတယ် ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမျက်နှာစာပေါ်အားထုတ်မှုစေသည်, ဒါပေမယ့်လည်း "အချိုးမညီစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအခြေအနေတွင်" လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်သော။
မာလီအတွက်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝုိင်း၏မဟာဗျူဟာကိုမကြာခဏလုံခြုံရေးရှုထောင့်အပေါ်သာအာရုံစိုက်စွပ်စွဲလျှင်, တကယ်တော့ Minusma သာစစ်ရေးအရေးယူမှုနှင့်လုံခြုံရေးမှချုပ်ထားဘူး။ စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကကုလသမဂ္ဂမစ်ရှင်ဟာအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်မှရုံး Mbaranga Gasarabwe, ဒုတိယအထူးကိုယ်စားလှယ်သို့ built တစ်ဌာနခွဲ "တည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး" ရှိပါတယ်။
ဒီဌာန၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ? ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးတို့အတွက်စီမံကိန်းကိုငွေကြေးသေချာစေရန်အရင်းအမြစ်များကိုစည်းရုံးနှင့်စီမံခန့်ခွဲ။ 2009, Loubna Benhayoune အတွက် Mauritania အတွက် 2012 နှင့် 2012 မှ DRC 2014 အတွက်တောင်ပိုင်းကီဗူအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရေးရာကုလသမဂ္ဂညှိနှိုင်းရုံး (OCHA) ၏ဟောင်းများဌာနမှူး, Minusma ၏ဌာနခွဲအကြီးအကဲဖြစ်ပါတယ်။
Loubna Benhayoune, အ Minusma ၏တည်ငြိမ်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအပိုင်းဒါရိုက်တာ။ © Minusma
Jeune Afrique: သူမကလူတွေကိုအကြိုးခံစားရန်၎င်း၏စီမံကိန်းများကိုသတ်မှတ်ရန်ဘယ်လို Minusma?
Loubna Benhayoune: ကျနော်တို့သုံးရန်ပုံငွေယန္တရားများကိုစီမံခန့်ခွဲ။ ပထမဦးဆုံးကျနော်တို့အဘယ်သူ၏နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက် $4သန်းက "အမြန်သက်ရောက်မှုစီမံကိန်းများကို" ခေါ်တဆင့်ရန်ပုံငွေဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမစ်ရှင်၏အစကတည်းကကျနော်တို့အကြောင်းကို 20 သန်းစုစုပေါင်းဘတ်ဂျက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည် 525 စီမံကိန်းများအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
အပို-ဘတ်ဂျက်ဖြစ်သောဒုတိယယန္တရား, မာလီအတွက်ပစ္စုပ္ပန်အလှူရှင်များအားဖြင့်ကျွေးမွေးသောမာလီအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးတို့အတွက်ယုံကြည်မှုကိုရန်ပုံငွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစိုးရ, လုံခြုံရေးနှင့်တရားမျှတမှုအဖွဲ့အစည်းများမှထောက်ခံမှု, လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုရည်မှတ်စီမံကိန်းများကိုငွေကြေးအသုံးပြုသည်။ ဤကိစ်စတှငျအကြှနျုပျတို့ကြားဝင်၏အစအဦးကတည်းကအကြောင်းကို 80 သန်းအသုံးချ။
Kiff အဘယ်သူမျှမ Beat - ဟာလေလုယ
ဆီနီဂေါ: သပိတ်နှင့်အတူတိုက်ပွဲလည်းအကြမ်းဖက်ရှိပါသလား? - JeuneAfrique.com